November 6, 2020 Dai 8, 2022 0
Iwe wapedza mwedzi uchigadzirisa script, storyboarding, kutsvaga tarenda chairo, kupfura, uye kugadzirisa. Mhedzisiro? A blockbuster brand kana chigadzirwa vhidhiyo.
Nenguva yese yakadyarwa, haugone kumira pakungopinza vhidhiyo papeji rekutanga kana kuigovana pasocial media uye uchitarisira kuti mumwe munhu arinde.
Kunyangwe hazvo zvemukati zvakasungwa kuti zviwanikwe, zvakakoshawo kuti uve nehanya nezvekuwana tarisiro nekudzidzisa tarisiro uye nevaya vasina kujaira neyako brand. Kumhanyisa akateedzana eYouTube kushambadza ndeimwe nzira yekuita chokwadi chekuti vazhinji vevateereri vako vanowana vhidhiyo yezvinhu zvawakagadzira.
Uye nemafomati matsva uye kugona kugona, iwe unogona zvakare kushandisa iyi ruzivo kuzivisa pane yayo ROI.
Chinhu chacho ndechekuti kushambadza paYouTube kwakasiyana kwazvo nekumhanyisa PPC kana kubhadharwa mushandirapamwe. Pane zvakanangana nekusika uye tani yesarudzo papuratifomu iyi, uye iwe unoda ruzivo rwepasi usati watombowona rako rinotevera vhidhiyo projekiti kuti uwane akanyanya mukana akabhadharwa.
Chii Chitsva NeYouTube Kushambadzira
MunaJanuary 2017, Google yakazivisa zvaizoita shanduko kuAdWords kubvumidza vashambadziri kuti vasvike kune vakawanda vanoona paYouTube - kunyanya pamidziyo yenhare, panowanikwa 50% yeYouTube. Pakati pechinjiso chakaburitswa, pamwe chiziviso chikuru ndechekuti vashambadzi vachakurumidza kunongedza vataridzi zvichibva pane yavo yekutsvaga yeGoogle, pamusoro pehunhu hwavo hwekuona YouTube yanga ichitotarisa.
Vashambadziri vava kukwanisa kunanga kushambadza kune vanhu vachangotsvaga chimwe chigadzirwa kana sevhisi kunongedza vhidhiyo kushambadzira ivo vachazopihwa papuratifomu. Kana zvirimo zvevhidhiyo kushambadzira zvakabatana zvakanyanya nekutsvaga izvo muoni anga achitsvaga, vanogona kuve vangangotarisa kushambadza kwese kana kudzvanya kuburikidza neshambadziro kune webhusaiti.
Mazwi akakosha akadhura kudhura paYouTube pane echinyakare Google Tsvaga: Maonero anodhura avhareji ye $ 0.06 nekudzvanya paYouTube, zvichienzaniswa neavhareji Google Kutsvaga mutengo nekudzvanya, iri Inofungidzirwa kuva pakati pe $ 1-2. Kana YouTube ichinongedzera inosanganisira yekutsvaga nhoroondo, inogona kunge iri nzira inodhura-yakanangana nekunanga vateereri vako neiri fomu rinobata zvemukati - vhidhiyo.
Iwo matatu Mhando dzeYouTube Vhidhiyo Ads
Kune matatu akakosha marudzi emavhidhiyo kushambadzira maunogona kuisa mari paYouTube: TrueView, Preroll, uye Bumpers.
TrueView shambadziro ndiwo akajairwa evhidhiyo shambadziro paYouTube. Vashambadzi vanobhadhara chete TrueView ads kana vatariri vachitarisa kana kusangana neshambadziro yavo (semuenzaniso, nekudzvanya pakudaidzira-kuita-chiito), uye mavhidhiyo anogona kugadziriswa nyore nyore kuti agovane zvakasiyana zvemukati.
Vashambadziri vanobhadhara chete kana mushandisi akatarisa kushambadzira kweanoda kusvika masekondi makumi matatu kana kusvika pakupera kwevhidhiyo kana kana muoni achitora danho, senge nekudzvanya pane yekufona-ku-kuita. YouTube inoda izvo zvinokwenenzverwa TrueView kushambadza kuve pakati pemasekondi gumi nemaviri uye maminetsi matanhatu pakureba, uye izvo zvisingakundike TrueView kushambadza kuva 12-6 masekondi pakureba.
Kune maviri marudzi e TrueView shambadziro yaunogona kukwidziridza yako YouTube chiteshi:
Vhidhiyo Discovery Ads (Pakutanga Yakatumidzwa In-Ratidza Ads)
Vhidhiyo inowanikwa YouTube ads ratidza pane peji reYouTube peji, mapeji ekutsvaga, uye semavhidhiyo akafanana paYouTube mavhidhiyo ekuona mapeji.
Aya ma ads akaonekwa mushure mekuita kutsvaga kweYouTube:
ichi kuratidza ad inoratidzika sevhidhiyo inoenderana kurudyi-vhidhiyo sidebar:
Kamwe mushandisi paanodzvanya pane kushambadzira, iyo yekuenda vhidhiyo peji inoratidzira nzvimbo pane kurudyi-ruoko ikholamu uko shamwari shamwari kuratidza ad ichaonekwa.
TrueView in-kuyerera kushambadzira tamba munhu asati aona vhidhiyo yavakasarudza paYouTube. Vataridzi dzimwe nguva vane mukana wekusvetuka kushambadza mushure mekuriona kwemasekonzi mashanu. Iwe unogona zvakare kuita kuti vatambe chero kupi muGoogle Ratidza Network (GDN) - kana saiti dzakatenga Google vhidhiyo yekushambadzira nzvimbo.
In-stream kushambadzira regai vashambadzi vagadzirise kushambadzira kwevhidhiyo nemaCTA akasiyana uye nekufukidza zvinyorwa, sezvakaratidzwa mu skippable mu-rwizi kushambadzira muenzaniso pazasi kubva Grammarly.
Hezvino izvo zvimwe skippable in-stream ad kubva kuWix inoita senge. Mumuenzaniso uyu, pane imwe CTA kubva kuWix pamusoro pekurudyi-ruoko vhidhiyo menyu inoratidza:
Izvo TrueView Vhidhiyo Zvinogona Kusanganisira
TrueView vhidhiyo mishandirapamwe inogona kusanganisira vanhu, kutaurirana, uye mimhanzi iyo yakadzoswazve nemvumo - kana inoonekwa seyeumambo-yemahara. Nekudaro, zvakanakisa kuti usamhanye kushambadzira kwakajairwa kushambadzira Nekuti aya mavhidhiyo anogona kutsvetwa, iwe unofanirwa kupa vateereri vako chikonzero chekuramba vakatarisa, uye zvigadzirwa plugs munhoroondo hazvigone maonero aungatarisira.
Pane kudaro, taura nyaya nenguva yauinayo muvhidhiyo iyi. Vanhu vanoda kuona zviitiko zveavo vakatarisana nehondo yavanogona kunzwira tsitsi nayo. Iyo sosi yevaraidzo inoita kuti yako mhando isakanganike uye isanyanya kuyedza kutsika.
Ne TrueView kushambadzira, vashambadziri vanogona kuwana toni yeruzivo nezve mashandiro eshambadziro avo ekugadzirisa uye kuyedza zvinangwa.
Uchishandisa AdWords, mamaneja eakaundi yeYouTube anogona kuunganidza data pane kushambadzirwa kwakapetwa, kusarudzika maonero, kana vhidhiyo ichifambisa chiteshi kunyoreswa, kudzvanya kuburikidza nemitero paCTA, maonero anotorwa kubva kumushandisi achigovana zvirimo, uye maonero pane zvimwe zvemukati zvechiratidzo zvinogona kuverengerwa kune munhu pakutanga achitarisa vhidhiyo kushambadzira.
Izvi zviito zvinobatsira vanoshambadzira kuti vanzwisise zvirinani kukosha kuzere kwevhidhiyo yavo yekushambadzira uye nekwavanogadzira bhajeti yekuwedzera mhedzisiro.
Mamwe ma-in-stream ads ari isingasviki uye anogona kutamba pamberi, mid-roll, kana mushure mevhidhiyo huru. Aya anonzi maPreroll kushambadzira, uye anogona kuve masekondi gumi nemashanu kusvika makumi maviri pakureba.
Heino muenzaniso weiyo isingasvetuke vhidhiyo kushambadzira pamberi pechinyorwa chikuru paYouTube:
Kunewo zvakare isingasviki, yepakati-roll vhidhiyo kushambadzira, ayo anooneka pakati nepakati YouTube vhidhiyo iri Maminitsi gumi kana kupfuura pakureba.
Source: PC Mazuva ese Matipi
Chii Chaunotungamira Mavhidhiyo Unogona Kusanganisira
Yekushambadzira kushambadzira inokupa iwe yakasununguka yakawanda seye TrueView kushambadzira mune avo akagoverwa zvemukati. Iwe unogona kusanganisira vanhu, kutaurirana, odhiyo, uye zvimwe zvinhu zvaunowana zvakanakisa zvinomiririra zita rako mumasekondi gumi nemashanu kusvika makumi maviri.
Nekuti kushambadzira kwepamberi hakugone kutsikwa, mavhidhiyo aya akanyatsogadzirwa aine kufona-ku-chiito (CTA) kuti ugone kukwidziridza kutarisisa kwauinako kubva kumuoni. Mune mamwe mazwi, kurudzira vataridzi kuti vadzvanye pane yako kushambadza uye vagamuchire chimwe chinhu mukudzoka. Pamwe iwe waburitsa chigadzirwa nyowani kana kukurudzira chiitiko chakakura mwaka uno uye uri kutsvaga signups - shandisa iyi preroll kushambadzira kuti uwane iwo akadhinda.
Ramba uchifunga kuti YouTube inotengesa Preroll vhidhiyo nzvimbo pane yekubhadhara-per-tinya (PPC) hwaro. Ita kuti kubaya kukoshe.
Bumpers ndiyo yechitatu uye ipfupi mhando yeYouTube vhidhiyo kushambadzira iwe yaunowana kwauri. Pamasekondi matanhatu chete bumper, aya mashambadziro anotamba pamberi pevhidhiyo yakasarudzwa nemuoni.
Bumper vhidhiyo kushambadza zviri pachena haigone kutaurira yakanaka-inokwana nyaya mumasekondi matanhatu chete, asi ivo vanoita zvinotyisa zvinowirirana kumakuru mavhidhiyo emakampeni pane chitsva chigadzirwa kuvhurwa kana chiitiko. Ingova nechokwadi chekushandisa masekondi matanhatu nekuchenjera, uye unosanganisira chete izvo zvemuchina wako waunoda kuti vateereri vako varangarire.
Maitiro Ekumisikidza & Kuvhura YouTube Vhidhiyo Yekushambadzira Campaign
Paunenge iwe wagadzira yekushambadzira vhidhiyo iwe yaunoda kushambadza paYouTube, inguva yeku gadzira yako vhidhiyo kushambadzira mushandirapamwe. (Kana usati waita vhidhiyo, heino maitiro ekutanga nawo Animoto or Wistia, pamwe chete nevashoma mienzaniso mikuru.) Wobva waisa vhidhiyo yako kuYouTube.
Ikozvino, iwe wagadzirira kumisikidza yako yekushambadzira mushandirapamwe. Kutanga, enda kune yako Google AdWords account kumisikidza mushandirapamwe wako.
Tinya menyu ekudonhedza kurudyi-kurudyi kwebhatani tsvuku "+ Campaign" pane rako reGoogle AdWords peji uye sarudza "vhidhiyo."
Isa zita remushandirapamwe wako, uye ita shuwa kuti Vhidhiyo yakasarudzwa kubva kuType inodonhedza menyu.
Vhidhiyo Ad Ad Fomati
Sarudza "In-stream kana vhidhiyo yekushambadzira kushambadzira" kuve nechokwadi chako vhidhiyo kushambadza ichave iri TrueView fomati (mune mutero weiyo mienzaniso yakadudzwa pamusoro).
Gadza bhajeti yako pazuva. Iwe unogona zvakare kusarudza nzira yekuendesa - ingave yakajairwa dhirivhari, iyo inoratidza kushambadzira zvakaenzana mukati mezuva, kana kukurumidza kuendesa, iyo inotyaira maonero nekukurumidza sezvazvinogona. Iyo yekupedzisira yaizobatsira kana iwe uchida kushandisa pamufambiro kana chinhu chenhau chine chekuita nevhidhiyo yechiratidzo chako.
Sarudza kwaunoda kuti kushambadza kwako kuonekwe.
Kutsvaga kweYouTube: Vhidhiyo yako yekushambadzira ichaonekwa mumhedzisiro yekutsvaga uye ichaonekwa pane peji reimba reYouTube, chiteshi mapeji, uye mapeji evhidhiyo.
YouTube Mavhidhiyo: Izvi zvinomhanya TrueView kushambadza iyo inogona kuoneka mune-kuratidza kushambadzira kana mukati-kuyerera kushambadzira. Nesarudzo iyi, unogona kusarudza yako vhidhiyo kushambadza kuti ioneke pamberi kana kutenderera mavhidhiyo anoratidzwa paGoogle Ratidza Network.
Iwe unofanirwa kugadzira mishandirapamwe yakatsaukana yekutsvaga kweYouTube uye Vhidhiyo yeYouTube sezvo izvi zvichizokubatsira iwe kuteedzera mashandiro ekuita. Aya ma ads anopihwa kune vanhu vanoita zviitiko zvakasiyana zvakasiyana uye zvinoda huwandu hwakasiyana hwekuzvipira kubva kumuoni, saka zvakanakisa kuongorora mashandiro zvakasiyana.
Tsanangura nzvimbo yevashandisi vaunoda kuti shambadziro iratidzwe. Iwe unogona zvakare kusabvisa dzimwe nzvimbo.
Mutauro, Chishandiso & Nhare Yekubhidha
AdWords inokutendera iwe kudoma iyo inoshanda sisitimu, chishandiso, uye mutakuri wekufambira mberi kunongedza. Izvi zvinonyanya kukosha kushambadziro yeapp mobile, uye pane sarudzo yekuwedzera kana kudzikisa bhidha rako zvichienderana kana kadhi yevhidhiyo ikaratidzwa kune mumwe munhu pane mbozhanhare.
Nechekunze chikamu chegadziriro, iwe unogona kuseta kutanga uye kupera mazuva emushandirapamwe wako, gadzira yakasarudzika purogiramu yekuti yako vhidhiyo kushambadzira inofanirwa kuratidzwa, uye kudzikisira ezuva nezuva maonero uye maonero evashandisi. Izvi zvese zvinokubatsira iwe kuti uwane yakanyanya kudzoka kune yako kushambadza kushandisa.
Kugadzira iyo Vhidhiyo Ad Kugadzira
Tumidza zita reboka rako rekushambadza, wobva waisa chinongedzo cheYouTube chevhidhiyo iwe yaungade kushambadzira. Iwe unozosarudza kana iwe uchida kuti izvi zvimhanye seye-inoyerera kushambadzira kana ye-inoratidzira shambadziro.
Zve-mu-kuratidza, iwe unozofanirwa kuisa zita uye rondedzero ipfupi, iyo inopinda mumitsara miviri yakasiyana. Ongorora: Mazita ekuremekedza akaganhurirwa pamavara makumi maviri neshanu, uye mitsara yemitsara inogumira kune mavara makumi matatu neshanu imwe neimwe.
In-stream kushambadzira inokupa iwe nesarudzo yekuwedzera URL yekuratidzira pamusoro pevhidhiyo. Iwe unofanirwa kushandisa zvisina maturo URL iyo inonongedza kune imwe yekupedzisira URL kuti iite kuti inyatso kuyeukwa. Iwe unogona kusanganisira epamberi URL yekutevera sarudzo. Uye zvakare, shamwari bhanhire yakagadzirwa kubva kumifananidzo kubva muvhidhiyo yako ichaonekwa kurudyi kweye vhidhiyo kushambadzira.
Iwe unozobva wasarudza iyo max mutengo wauchazobhadhara kune yega yega maonero, ayo iwe aunogona kugadzirisa kuti uwedzere huwandu hwezvakaratidzwa maonero ako vhidhiyo inogona kugamuchira.
Chekupedzisira, unogona kuwedzera kutsanangudza vateereri vaungade kuti vhidhiyo iratidzwe - sarudzo dzinosanganisira mukadzi, zera, uye chinzvimbo chevabereki. Iwe unogona zvakare kunongedzera vanhu nezvido zvavo, senge runako maven, vanobika vanofarira, vanotyisa mabhaisikopo emamuvhi, nezvimwe. Edza kumhanyisa makwikwi mazhinji kunongedza mapoka akasiyana evashandisi kuti uone kuti ndiani akabatikana, pane kusanganisira wese munhu waunoda kunongedza mune imwe. mushandirapamwe.
Iwe unogona zvakare kunongedza vanhu neakakosha mazwi, misoro, kana mawebhusaiti iwe paungade yako vhidhiyo kushambadza kuoneka. Keyword yekunangisa ne-inoratidzira kushambadzira inogona kuve chishandiso chakasimba chekutsvaga vanhu vari kutsvaga mhinduro yekuona kumubvunzo. Ive neshuwa yekuita yako tsvagiridzo, uye edza kuyedza kunze akasiyana mapoka ezvinyorwa kuti uone izvo zvinotungamira kune akawanda maonero, kudzvanya, kana shanduko.
Pamusoro pezvo, unogona kushandisa AdWords vhidhiyo kushambadzira kutaura zvakare kune vanhu vanga vachisangana neako brand kare. Izvi zvinogona kukubatsira kuti ubatanidze zvakare avo vatove vanoziva neako marashi.
Kubatanidza Akaundi Yako
Iwe unofanirwa kusanganisa yako AdWords account kune YouTube chiteshi uko vhidhiyo inogarwa kana usati watove. Iwe unogona zvakare kudzvanya "kupedzisa" kuti utange kumhanya yako vhidhiyo kushambadzira mushandirapamwe.
Matipi gumi ekuvandudza AdWords ako eVhidhiyo Ads
Kuvhura vhidhiyo kushambadzira mushandirapamwe inhanho huru, asi pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kumisikidza usati watanga kubhadhara maonero kuti ushandise bhajeti rako uye kuti uone kudzoka kwakanyanya kumutengi wako.
1. Tsanangura yako metric uye zvinangwa.
Paunenge uchiongorora mhedzisiro, pane zvikamu zvina zvakakura zvemethriki iwe zvaunogona kuteedzera kune yega vhidhiyo. Izvi zvinowanikwa pasi pe "column" donhwe-pasi mumushandirapamwe wako interface.
Pasi pechikamu che "maonero", unogona kunzwisisa zviri nani chikamu cheshambadziro chakaonekwa nevanhu uye nekunzwisisa mashambadziro aibata sei maonero kana maonero pane mamwe mavhidhiyo emuchina wako.
Ichi chikamu chinogona kushandiswa kuteedzera zvinodiwa uye zvikamu kune yega vhidhiyo kushambadzira.
Chiyero chekuona chinofanira kuratidza kana iyo yekugadzira uye meseji iri kunakidza kana kuvaraidza zvakakwana kuti vanhu vatarise kushambadza. Nekuwedzera kwako kuona-kuburikidza chiyero (VTR), iwe unodzikisa mutengo wako pakuona.
Shanduko dzinobatsira iwe kuti unzwisise zvirinani kana shambadziro yako iri kutyaira inotungamira uye ichidzosera yakakwira ROI yechako brand.
Zvichienderana nezvinangwa zvechiratidzo, iwe unofanirwa kuona zvibodzwa zvishoma zvichibva pamametric aya uye kuronga chirongwa chekugadzirisa kugadzira uye kuyedza nzira dzakasiyana dzekutarisa kuvandudza mhedzisiro. Zvinangwa zvako zvinofanirwa kuonawo mhando yezvinyorwa zvaunoratidzira mukushambadzira - mamwe metric ari nani ekumaka zvibodzwa uye vamwe vanofambisa zvinotungamira uye shanduko.
2. Tevedzera zvakaderera kuita kwekuisa.
Kana iwe uchimhanyisa mu-kuratidza shambadziro dzinozoonekwa pamhiri paGoogle Ratidza Network, unogona kuongorora uko kushambadza kwaonekwa mukati nekuenda kuVhidhiyo Targeting> Kuiswa> Kwakaoneswa kushambadza> Ratidza network kubva kune yako Google AdWords Campaigns dhibhodhi. Wongorora runyorwa urwu kuti uone kana paine mamwe masayiti ari kupa mukusaita zvakanaka kune ako metric aunoda. Bvisa aya masayiti kubva kumushandirapamwe wako wekushambadzira kuenda kumberi kuti uwedzere yako yepakati CPV.
3. Shandisa akajairwa thumbnail mufananidzo.
Dhizaina kana shandisa yepamusoro-soro ichiri mufananidzo kubva muvhidhiyo kunyengedza muoni kudzvanya pavhidhiyo yako. Rangarira, uyu mufananidzo unofanirwa kuve unonzwisisika nevashandisi pamidziyo yakasiyana, kusanganisira nhare. Kana mufananidzo wako uine munhu, ita shuwa kuti ari kutarisa mukamera. Kana iwe uchiratidzira chigadzirwa, ita shuwa kuti kumashure hakukanganise.
4. Kutyaira vanhu kuti vatenge nemakadhi.
A Kadhi reYouTube inosekwa nekadiki "i" chiratidzo, icho muoni anogona kudzvanya kuti awedzere. Unogona kuisa nguva pakuonekwa uku saka vashandisi chete vanoita vhidhiyo uye zvemukati ndivo vanozoona iyo ziviso.
Nemakadhi, unogona kuratidza chigadzirwa chine chekuita kana kuratidzwa muvhidhiyo kutyaira zvigadzirwa kutenga. Iwe unogona zvakare kushandisa makadhi kutyaira fundraising mipiro, traffic kune URL, kana traffic kune mamwe mavhidhiyo sezvakaratidzwa mu muenzaniso pazasi kubva Refinery29. Imwe fomati inokutendera iwe kugadzirisa kadhi nerunyorwa, mifananidzo, uye zvimwe sarudzo.
5. Gadzira mafoni-kune-zviito.
Kana uchisimudzira vhidhiyo paYouTube, unogona kusanganisira kufonera-kune-chiito chepamusoro chinobatanidza kune URL. Iwe unogona kubatanidza kune inogara peji, chigadzirwa peji, ruzivo peji, basa peji… chero chaungade. Iwe unogona zvakare kutumira vanhu kumushumo wakanaka kana kubvunzurudza uine iyo mhando.
Adobe inosimbisa imwe yeayo mavhidhiyo aripo uchishandisa kufona-kune-chiito kufukidza:
6. Gadzira YouTube yekupedzisira slate.
Gadzira yekupedzisira skrini kutyaira vanyoreri kuchiteshi chako, kusimudzira ako masocial network, kana kuwedzera kufarira muchiso chako. Kana mumwe munhu akatarisa vhidhiyo kusvika kumagumo, chiratidzo chakanaka vanofarira zvemukati uye vanogona kufarira kunyorera kuchiteshi chako kuitira ramangwana. The Manheru Show Starring Jimmy Fallon'' magumo slate inoshandisa ichi skrini kutyaira vanyoreri uye maficha enhau vezvemagariro nekuratidzawo mimwe misoro inonakidza inomiririrwa nenjere. Paunenge iwe ukavaka iwo mufananidzo, iwe unozogona kutsanangura yekupedzisira skrini muYouTube vhidhiyo mupepeti.
7. Shandisa zvisina kunaka kutaura zvakare.
Kana iwe uchimhanyisa mushandirapamwe kwenguva yakareba uye uchingoda kukwezva vashandisi vatsva kuchiratidzo, funga kugadzira runyorwa rwevanhu vasingazoratidzwa kushambadziro yako. Paunenge uchiona skrini yako yeAdWords Campaign, sarudza "Yakagovaniswa raibhurari" pazasi reruboshwe. Wobva wasarudza "Vhidhiyo yekudzokorora" uye "+ Remarketing Chinyorwa". Iwe unogona kutambanudza bhajeti yako yemushandirapamwe uye kunanga vashandisi vakasarudzika chete nekusarudza kuti usaratidze kushambadza kwevhidhiyo yako kune mumwe munhu akamboona vhidhiyo yacho, akamboshanyira chiteshi chako cheYouTube, kana akagovana, akafarira, kana kutaura pane chero mavhidhiyo ako pane ako mugero.
8. Shandisa zvinyorwa zvepadyo kuti uwane zvinodiwa nevanoona uye zvavanoda.
Iri zano rinoshanda kune ese mavhidhiyo eYouTube - asi iri tsika yakanaka kwazvo isingateedzerwe nemhando dzakawanda. Sanganisira yemhando vhidhiyo zvinyorwa zvawakagadzira uye nekutendera. Chete zvinyorwa-zvinoteedzerwa nemushandisi zvakanyorwa neGoogle nekuti YouTube inogona kungoita zvinyorwa zvishoma pane zvakavimbika. Zvichienderana nevateereri vako, iwe ungangodawo kuisa zvinyorwa mune mimwe mitauro. Iwe unogona zvakare kupa vashandisi sarudzo yekutora kana kushanyira peji resaiti ine yakazara kunyorwa mune yako vhidhiyo tsananguro.
Dzimwe nguva, kushambadza kwako kunozoonekwa nevanhu vasina hanya nechako chigadzirwa. Vakurudzire kuti vasvetuke kushambadzira kana zvirimo zvisina basa saka haufanire kubhadharira iwo maonero uye ivo havasi kutambisa nguva yavo vachiona kushambadzira kusinei nazvo.
10. Funga kuita shambadziro yako yakareba.
Kana zvasvika kune TrueView ads, kana kushambadza kuri pasi pemasekondi makumi matatu, iwe unobhadhara chete kana muoni akatarisa kusvika kumagumo. Kana kushambadza kwacho kwakareba kupfuura masekondi makumi matatu, iwe unobhadhara kana muoni achiiona kwemaminetsi makumi matatu. Muzviitiko zvese izvi, iwe unobhadhara kana muoni achidyidzana neshambadziro yako isati yapera. Funga izvi kana iwe uchiuya nemazano ezvinyorwa zveshambadziro. Iwe ungangoda kuisa mameseji pane imwe nhanho kuti vatariri vasina kufarira vafambe mutambo, kana iwe ungangopa zvipo zvakakosha kusvika kumagumo evhidhiyo.
Ramangwana reVhidhiyo rakajeka
Takambokuudza zvisati zvaitika: Zvemukati mevhidhiyo inofanirwa-kuve nechikamu chehurongwa hwako hwemukati. Izvi ndezvechokwadi ikozvino izvo YouTube inoita kuti vatengesi vataridze vashandisi zvichibva pane yavo yekutsvaga nhoroondo. YouTube kushambadzira yakanangwa zvakanyanya kupfuura nakare kose, uye haina kukwikwidza real estate kupfuura nyika yeGoogle Tsvaga nekuti vhidhiyo yezvinhu iri nyowani kune zvemukati mamiriro uye isinganyanyo kufarirwa pane blog mablog.
Gara wakatarisira zvimwe kubva kwatiri nezve maitiro ekugadzira makuru mavhidhiyo kushambadza kweYouTube uye zvemagariro midhiya, uye nekwatinofunga Kushambadzira kweYouTube iri kunotevera.
20 YouTube Tricks, Hacks, uye Zvimiro Zvauchada Kuziva Nezve Gore rino
Yekupedzisira Nongedzo kuAmazon Kushambadzira
Maitiro Ekukwezva YouTube Kushambadzira Yako Yakanangana Nemhinduro Campaign
Inoteerera Kutsvaga Ads: 5 Dzakanakisa Maitiro eGoogle Ads PPC yekutsvaga Campaign